Top 5 Free Apps inuu kaa caawiyo inaad sir Messages Your Text
1.16 SMS nidaameed
1.17 dir Group Message
Maaddaama ay khatar dhinaca ammaanka ah ee caadiga ah, ka walwalsan rogida dowladda ee isgaarsiinta maalin kasta iyo fariimaha baraha kale, dadka isticmaala telefoonka mobile ayaa noqday mid aad u xeel dheer. Waxaa jira dadka qaar u baahan yihiin fariimaha qoraalka ah lo iyo calls for baahida ganacsi oo ay jiraan qaar ka mid ah dadka kale ee ma doonayaan in dadka kale si ay u hadaaqda oo noloshooda. Waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyadooda ku ool ah oo buuxiya baahida this. Waxaa jira wax badan oo Windows XP app Fariin u bilaash macaamiisha kuwaas oo doonaya inay sii noloshooda gaarka ah ay gaarka loo leeyahay, iyadoo aan wax lacag lacag aad u badan. Inta aynaan app sida, waa in mid ka mid ah ay awoodaan in ay kala dhexeeya fariimaha qoraalka ah ammaan oo loo xafidayaa, in la heli karo ka dib, sida caadiga ah la filayaa la fariimaha qoraalka ah iyo fariimaha qoraalka ah raaxaystaan ​​si gaar ah oo aan ku badbaadi oo daruur / servers iyo baaba'aan in qaar ka mid ah set qadar wakhti. Waxaa jira qaar ka mid ah Chine in ay bixiyaan labada muuqaalada halka barnaamijyadooda qaar ka mid ah, waxaad u baahan doontaa in la beddelo goobaha si loo hubiyo in nolosha fariimahan. Waxa kale oo aad u baahan tahay in la ogaado waa in barnaamijyadooda Fariin lo aan ku siin doono nabadgelyo. Haddii ay dhacdo in aadan ka dhigay code uu baas ka dibna qof qaba helitaanka qaab si telefoonka mobile awoodi doonaan in ay arkaan fariimaha aad. Sidaas, haddii aad si dhab ah uga welwelsan yahay gaarka ah ka dibna miyirka oo waa lagama maarmaan.
Halkan waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah fariimaha ugu wanaagsan text imayl barnaamijyadooda faahfaahinta:
1. TextSecure iyo Signal
TextSecure iyo signal app waxaa la abuuray by cilmi hore ee Twitter ammaanka (nidaamyada Moxie Marlinspike ee Ruuxna furan) oo si fiican u sir fariimaha u Android lacag la'aan ah, inta kale iyo gaadiidka labadaba.
 Iyadoo app this, in aad qof u diri kartaa fariimaha qoraalka ah ee liiska xiriirada aad laakiin sirta dhamaadka-to-dhamaadka ee fariimaha qoraalka dhici doona oo keliya in CHAT la users kale ee app this. Si kastaba ha ahaatee, markii wada hadal ma aha ammaan ah, app wuxuu kuu sheegi doonaa.
 Waxaa jira qaar ka mid ah fursadaha taas oo aad awood in ay kordhiyaan ammaanka oo ay ka mid ikhtiyaar sida Screenshot naafada ah ay furayaasha default iyo sirta iskaanka si looga fogaado nin ee weerar dhexe.
 Waxaad xitaa soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah ee ay xogta halkii diraya SMS oo kaa caawinaysaa in aad si looga fogaado metadata bixiyaha telefoonka aad kaydinta.
Waa lacag la'aan ah Android oo ugu dhaqsaha badan diyaar u noqon doonaa macruufka desktop
• Waxaad u diri kartaa fariimaha qoraalka ah lo iyo MMS for free
• Aad u fudud set-up
• fursadaha goob xoog leh ayaa la heli karaa
• Waa sir inteeda kale iyo gaadiidka labadaba
• Waa hufan in datada sii dhamaystiran fariin maktabadda
• Stock Rasuul aan la bedelay si buuxda
• Waxaa kaliya oo diyaar u ah Android hadda
• Fariin Media waa ooyayo
• Qorshaha Text ayaa loo baahan yahay
Wickr aad u saamaxaaya in ay wadaagaan / fariimo is-destructing lo dhamaadka-to-dhamaadka. Tani waxay xitaa ka mid ah oo dhan ku lifaaqan file iyo sawiro aad.
 Waxay kaa caawinaysaa in aad in baaq loo diro dhamaadka-to-dhamaadka lo, Rasuul cod, sawiro iyo videos la dhamaystiran diraha gacanta.
 Waxaad irreversibly masixi karaan dhamaan fariimaha, videos iyo sawirada lagu tirtiray telefoonka.
 photos raaxaystaan ​​/ wada hadalka waxaa lagu sameyn karaa si ay baaba'aan ka 3 ilbidhiqsi ilaa 6 maalmood.
Android iyo macruufka
• Focus on yahay ammaanka users
• interface ayaa soo hagaagtay
• Waxa uu bixiyaa layers of encryption
• Nidaamyada xaqiijistay oo hufan ee wax ka goobidda dadka
• doorasho Shredder
• User qeexay nolosha qofka warbaahinta iyo farriimaha
• Fariin Group
• Waxaa laga yaabaa in shaashada ka kooban
• Sida marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale, waxa ay leedahay saldhig user yar
• Tallaabooyinka amniga ma bixiyaan hagaagsan ka mid ah telefoonada badan
Telegraam ayaa diiradda ku saabsan ammaanka iyo xawaaraha. Waxaa syncs dhexeeya telefoonada oo dhan iyo waxa loo isticmaali karaa on telefoonada, kiniiniyada iyo xitaa desktops oo la sameeyo dadka kuwa doonaya dhamaystiran gaarka ah.
 Waxaa kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimo aan xad lahayn, videos, sawirada iyo wixii noocyada kale ee files iyo bixisaa CHAT qarsoodi ah.
 kooxaha telegraam yeelan karaan 200 isticmaala. Waxaad in 100-qof oo soo diri kartaa warbaahinta waqti isku mid ah.
 Waxaa xitaa ka shaqeeya si hufan oo ku saabsan xidhiidhada ugu saboolsan mobile.
 Waxaa lagu kalsoonaan karo oo gebi ahaanba bilaash ah
• app dar-xor ah oo gebi ahaanba bilaash ah
• qalabka Multiple .Wadashaqayntaas
• U dir nooc kasta oo file size of a ilaa 1GB
• fariimaha burburin lahaayeen la saacad go'an
• Store aad warbaahinta oo daruur
• No cod wacaya doorasho la siiyaa
Gliph bixisaa isgaarsiinta haboon dadka aad shabakad ganacsi ama network bulshada. Waxaa sidoo kale la Seeraar lacagta app iyo waxa ay sidoo kale bixisaa fariimo group aamin.
 Waxay bixisaa dhamaystiran gaarka ah. Marka aad tirtirto fariimaha, waxaa laga masaxayo labada dhinac ee wada hadalka iyo sidoo kale ka server.
 Waxaa bixisaa Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah warshadaha-sare iyo gaarka ah iyo sidoo kale abuuray in ay gacanta ku barnaamijyadooda kale ma bixiyaan. Ma uusan aad u helida internetka waana dar xor ah.
 One feature gaar ah waa Fariin group aamin debecsan oo kuu ogolaanaya inaad si ay u muujiyaan anagu koox ciyaaraha ah, oo aad magaca dhabta ah si ay u wada shaqeeyaan.
Android, macruufka iyo desktop
• Seeraar karti codsiga
• tirtirtaa farriimaha si buuxda
• sow ma aad mareenka online
• Tablet iyo desktop version
• cakiran gaarka ah password ilaalinta ilaalinta xogta
• images Hi-dhigsan lagu soo diri karaa si ammaan ah
• Si fudud oo badan oo fursado iyo goobaha
Surespot bixisaa sirta ku ool ah oo lagu kalsoon yahay dhamaadka-to-dhamaadka ee aad fariimaha qoraalka ah, sawirada iyo fariimaha codkaaga iyo siiyaan ammaanka dhamaystiran xogta gaarka kuu ah. Waa mid aad u fudud in la dhiso iyo sida loo isticmaalo. Waxay bixisaa gurmad fursadaha iyo riixdo farriimaha iyo sameeyaa waxa sheegay. Marka app furan yahay, farriimo ayaa helay oo isla goobtii diray via godka IO. Waxaa gebi ahaanba bilaash ah.
 Ma ku xiran yahay E-mail ama lambarka telefoonka aad ..
 Waxaa kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimaha codka jeer marka aadan rabin in oo fadhiisan nooca.
 Si aad u xajisaan kulli xogta ka soo soocay, waxay bixisaa aqoonsiyo fara badan oo ku saabsan qalab aad iyo aad aqoonsiga waa wareejin. Waxaad awoodi doonaa inay xawilaan oo dhan CHAT aad ammaan qalabka kale.
• il Open
• Waa quruxsan si degdeg ah oo lagu kalsoon yahay
• Design waa qurux badan oo sahlan
• fariimaha Audio iyo sanamyadii waxaa taageera
• Waxaa uu kaydiyaa 1000messages oo kaliya markiiba.
• Video aan la taageeray
• Ma taageeri Fariin group
• No sirta weeraryahanka
Top ciyaaryahanka 50 music for Windows / Mac / macruufka / Android
Top 50 video ciyaaryahan ee Windows / Mac / macruufka / Android
Top ciyaaryahanka 50 FLV daaqado / Mac / macruufka / android
Dib u eegista video Converter AHV iyo waxyaabaha kale ee
10 CD Qaasaali Taageerayaasha Adele ayaa Waa Leedahay
> Resource > Top List > Top 5 Free Apps inuu kaa caawiyo inaad sir Messages Your Text